EPhafu - idolobha ukuthi idume namasiko alo lasendulo, lenqwaba izindawo zomlando, kanye ngesimo sezulu esihle futhi ulwandle efudumele. Ngakho-ke akukho lutho isimanga yokuthi njalo ngonyaka edolobheni evakashela izinkulungwane zezivakashi. Njengokulindelekile, sikhululekile ngemfudumalo ubingelela wonke izihambi, babanike zonke izimo iholidi ehloniphekile. Zithandwa namuhla ihhotela Basilica Holiday Resort 3 *. Uphi ehhotela? Yiziphi izimo kulindele izivakashi uhlale? Kungenzeka yini ukuba uphumule lapha nomndeni wakho? Izimpendulo zale mibuzo ziyoba abafundi abaningi abahamba eholidini.
Indawo ilungiselelo ehhotela eyinkimbinkimbi Basilica Holiday Resort 3 * - ePhafu, elinye lamadolobha athandwa kakhulu futhi owaziwa kuleli zwe. Ihhotela Yaziwa indawo yayo evumayo isayithi. Ukuze uthole enkabeni yedolobha ngeteksi noma ngebhasi (endleleni, esitobhini sebhasi nje amamitha ambalwa kusukela ehhotela). Beach 250 m kuphela. Eliseduze sezindiza 10 km, okuyilona elisebenzayo futhi ngempela elula. Ngaphezu kwalokho, eduze eziyinkimbinkimbi ehhotela zikhona izitolo eziningi, boutiques, ezikhangayo mlando kanye lathumela, iminyuziyamu, nokunye. D. Muva nje, endaweni yedolobha aseqalile full-scale yokwemba, ngakho ngeke sibheke lokho.
Incazelo emfushane ingqalasizinda
Ihhotela Basilica Holiday Resort 3 * itholakala endaweni ethokomele, ekhoneni olunothile, eduze nogu lolwandle. Le ndawo Imininingwane imayelana 5000 square metres. Kunezinhlobo eziningana izakhiwo esinezitezi ezintathu obubekelwe eceleni amakamelo ophilayo, zokudla, nemishayo, njll Le ndawo kakhulu efanayo lihlotshiswe Devereaux, nezihlahla sculpted kanye amalungiselelo flower ezimibalabala - .. Kuyinto njalo emnandi ukuhamba noma uphumule thunzi. Egcekeni kukhona ichibi ngokwanele ezinkulu nomthombo wamanzi aqabulayo.
Ihhotela Basilica Holiday Resort 3 *: isithombe kanye nencazelo kwamakamelo amahhotela
Yiqiniso, ingxenye ezinhle ebhishi holiday induduzo. Ngakho lokho izinombolo inikeza ehhotela Basilica Holiday Resort 3 *? Cyprus, ePhafu - indawo enhle kakhulu lapho idume izihambi yayo. Kulesi ehhotela uzothola khona ngezandla ezifudumele hhayi kuphela, kodwa futhi ibe banzi, amakamelo ukhululekile lwezigaba ezahlukene. Sekukonke kukhona 105 amakamelo. Igumbi ngalinye ejwayelekile siqukethe egunjini elincane lokuphumula, Ikhishi kanye okulala eyodwa, ababili noma abathathu. Kukhona studios double - amakamelo nge izinga eliphezulu wenduduzo.
Kungakhathaliseki isigaba, la makamelo aphindwe ephelele eziphumulele. Zibonisa ithala noma kuvulandi kusukela lapho ungajabulela engadini kanye pool noma idolobha. Iphansi embozwe tile Ceramic, ifenisha zisesimweni esihle. Zasendlini Imishini egumbini has a TV (lapha ukukhombisa abanye umculo wami isiteshi esisodwa Russian), kanye ngocingo kanye air conditioning. Le ndawo ekhishini has a microwave futhi i yokucela kagesi, kanye tableware.
Indlu yangasese ubanzi futhi ifakwe konke okudingekile. Kukhona eshaweni, ubhavu, usinki, esibukweni, iqoqo imikhiqizo inhlanzeko yomuntu siqu futhi iqoqo amathawula kuhlanzekile. Lapha uzothola dryer izinwele.
Kuyaphawuleka ukuthi amakamelo ehhotela Basilica Holiday Resort 3 * zisesimweni ephelele - yokuhlanza Kwenziwa nsuku zonke, izintombi zasemizini ukusebenza kunembeza.
Amandla supply wesifunda izivakashi ehhotela
Izivakashi zihamba uphumule ehhotela Basilica Holiday Resort 3 *, ukunikela lokuzikhethela of izikimu eziningana amandla - kungenzeka ukuthi BB (ibhulakufesi), HB (ibhulakufesi kanye dinner), kanye "zonke okufakayo" (konke ukudla, ukudla okulula kanye neziphuzo kubakhiqizi bendawo).
Kathathu ngosuku, bamkhonza amatafula ensimini ka yokudlela main. Njengoba nokubuyekezwa, ukudla lapha wehlukile ngempela - appetizers, izitsha side, inyama izitsha, imifino nenhlanzi, kanye inqwaba kophudingi kanye nezithelo ezintsha. By endleleni, uma ikhokhwe ibhulakufesi kuphela, wena namanje uzokwazi ukuba adle noma kwasemini in the yokudlela for izindleko elincane.
Ibha yokwamukela izivakashi ukhonza iziphuzo kanye Ungadla futhi izitsha okulungiselelwe phezu hlupha. Ngaphezu kwalokho, phezu kwaleli chibi, kanye lo muzi ngokwawo, kukhona inala izindawo zokudlela, amathilomu kanye nemigoqo, ngakho uqiniseka Anokubutha wena into angayithandi. Futhi eceleni kwehhotela lethu kukhona esitolo, lapho ungakwazi futhi ukuthenga imikhiqizo.
Ibhishi namanzi imisebenzi yokuzilibazisa
Njengoba sekushiwo, ebhishi itholakala amamitha 250 nje kusukela ehhotela - lula ukufinyelela ngezinyawo. Le sayithi senzelwe ukusetshenziswa umphakathi. By the way, cishe yonke emabhishi kule ndawo ePhafu kamasipala - bebodwa, ivaliwe izigaba ogwini kukhona amahhotela inkanyezi okunethezeka ezinhlanu kuphela.
Ogwini kuyinto enamadwala, kodwa ukwehla olwandle ngempela elula. On angajulile angasogwini angaba ageze izingane. Beach has ilanga loungers nezambulela - hati ukukhokha, kodwa kuyafaneleka akusiwona ebiza kakhulu. Yiqiniso, wonke umuntu uyokwazi ukukhwela isikebhe, Ukushushuluza amanzi, yesikebhe, isikebhe nokunye. D.
amasevisi engeziwe zabahamba
Isakhiwo ehhotela Basilica Holiday Resort 3 * - nendawo enkulu ukuhlala elula kodwa ukhululekile. Yiqiniso, ihhotela linikeza amanye amasevisi ezokwenza ukuhlala kwakho lapha ngokunethezeka.
Okokuqala, ake sithi ukuthi kukhona siqu exchange. Ilokhu egijima zokuhlanza owomile nelondolo, ngezinye izikhathi elula kakhulu. Kukhona encane car park ngokulondeka. By endleleni, uma ungumnikazi zokuthutha ngeke ke emzini, ungakwazi kalula ukuqasha imoto, isithuthuthu noma ibhayisikili. Eziyigugu kungenziwa zibekwe umaluju umlawuli ephephile. Uma uneminye izinkinga zezempilo, uxhumane othile abasebenzi - nawe nakanjani kuzokwenza udokotela kabani izinsizakalo zikhokhelwa ngokwehlukile.
Inokufinyelela ku-inthanethi ezindaweni resort umphakathi, kodwa ukusetshenziswa kwaso bakhokhele owengeziwe.
Ezokuzijabulisa nokungcebeleka izivakashi
Ehhotela kukhona ngokwanele ukubhukuda esikhulu pool sizungezwe ilanga loungers nezambulela ezibekwe - ungakwazi bazijabulise, uxoxe nabangani, ukudlala i-polo yamanzi noma nje ukuthamela ilanga.
Kukhona indawo amabhiliyade, table tennis. Uma wayefisa, kungaba nice uphumule Jacuzzi, vakashela i-sauna wendawo. Isizini lolwandle ehhotela Animators ngubani ukubungaza izivakashi usuku lonke ukusebenza. Futhi ngaleso yemidlalo bendawo ukuhlela imibukiso okuthakazelisayo.
Yini enye esingayenza ukunikela ehhotela Basilica Holiday Resort 3 *? EPhafu - emzini tinganekwane izindaba. Le ndawo ephelele lezo izihambi ngubani othanda sihlanganise iholidi beach nge ezihlukahlukene nemisebenzi zemfundo. Esikhathini ehhotela noma opharetha tour, ungathenga uhambo, uhlelo imizila ukuhamba phakathi komuzi. Ngokwesibonelo, Awukude eziyinkimbinkimbi zehhotela ezifana nokuzwa umxhwele njengoba catacombs St. uSolomoni, Ethnography Museum, iRoyal Amathuna, kanye Archaeological Museum yase-Pafos.
Ingabe kukhona izimo ngemindeni nezingane?
izivakashi eziningi uyazibuza ukuthi kungenzeka ukuthatha ingane eCyprus. 3 * Basilica Holiday Resort inikeza amanye amasevisi abazali ukuhamba nezingane. Okokuqala-ke Kuyaphawuleka ukuthi ukuhlala esizeni nojahidada isikhathi esingaba iminyaka emibili mahhala.
Ihhotela has a ebaleni lokudlala elincane kodwa kahle kwanikeza nge senhliziyo, lapho izingane zingaba nobumnandi kule nkampani yabazali bazo. Ngaphezu kwalokho, ekuseni iqala club yezingane. Lapha, izingane uzobe Animators nomzanyana wahlanganyela - izingane kungaba ezithakazelisayo futhi ngempumelelo ukuchitha isikhathi wahlanganyela imidwebo, yezandla, ezemidlalo, ithimba imidlalo, njll ...
Uma une kunesidingo okungazelelwe isikhathi esifushane ukuze ushiye ingane, ihhotela has a ngophethe abangochwepheshe iyohlala nengane ngenkokhelo elincane, bakunike njengoba ngesikhathi esifanele.
Ihhotela Basilica Holiday Resort 3 *: Izibuyekezo 2014
Inani elikhulu ulwazi olwengeziwe mayelana ehhotela elithile, ungathola ukuthi bacabangani ngawo nabanye abantu. Ngakho yini ngempela ihhotela Basilica Holiday Resort 3 *?
Izibuyekezo ibonisa ukuthi endaweni ethule ngempela futhi ethokomele ezokwenza ivumelane abathandi beach asebenzayo futhi indawo iholide. Amagumbi abasakwazi libanzi futhi ihlanzekile, ukudla okumnandi ku yokudlela, futhi sikhetha ukuba mikhulu. Abasebenzi konke nenhlonipho ezimnandi ukubhekana - endleleni, bakhuluma isiNgisi esihle kangaka, futhi ezinye ukukhuluma isiRashiya ngisho, ngakho izinkinga zokuxhumana akufanele kuphakama.
Ngokuqondene nemiphumela ethile engathandeki, abaningi ikhomba hhayi ngempela elula enamadwala lolwandle. Kodwa nje lemizuzu emihlanu ukuya kwenye, embozwe isihlabathi esithambile. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukuchitha isikhathi sakho e-Coral Bay. Uma engenzi ivumelane wena ikhokhwe inthanethi, ziningi amathilomu eseduze, lapho ukufinyelela World Wide Web mahhala.
Amazing Austria amahhotela evulekile entsha ...
Primasol Hane Umkhaya kuyona (Turkey, Side): incazelo, abahambi Izibuyekezo
Festa Pomorie kuyona 4 * (Bulgaria / Pomorie): izithombe kanye nokubuyekeza
Ihhotela Club Ihhotela Nena HV-1 (Turkey, Side): izithombe kanye nokubuyekeza
Ihhotela Hydramis Palace Beach Resort 4 * (eKrethe, eGrisi.): Ifotho nokubuyekeza
"Okkervil River": isifinyezo yemisebenzi Tatyana Tolstaya
Amalaka: ukuvuvukala, izimpawu
Isifo sofuba samaphaphu, izibonakaliso zayo, ukuxilongwa nokuphathwa
Bullfinch: isithombe kanye nencazelo. Bullfinch: incazelo inyoni izingane
Impahla Izimbali Ezikhangayo eSpain, izinzuzo nezingozi.
Ngubani engenathemba: izici isici
"Listata": ukubuyekezwa, imiyalelo. "Listata" neminye
Uhlelo nge isandiso tar.gz: ukuthi ungasetha kanjani, isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo kanye nezincomo